Godina arsii anaa shirkatii gochii gara jabummadhan humnii addaa Polisin nannoo orimiyaa qerroo – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsGodina arsii anaa shirkatii gochii gara jabummadhan humnii addaa Polisin nannoo orimiyaa qerroo
#Bilal_Qasim irratii rawatame kun bay’e gara nama nyata wan 2016 guyyaa takkaa kessati lubbuu nama meqa dhabne sanu garan arii nu bafane maf mada irraan mada biraa nuttii dabaluf yaalu jarrii kun garu hangaa yomiti kan biyyaa itti dhalane irratii mirga dhabnee gubachaa jiranu!! nama dhisii binesii biyyaa sera qabdu kessati dhalateyu nama biyyaa Etophia jedhamtu kessati dhalate olitii mirgii isaa kabajame jirataa yaa dhugaa dubadhu atii !!!!!!!
Waajjirri tika biyyoolessaa guyyaa har’aa Abiy Ahmediin durfamee gamaggamni taasifamee jira. Gamaggama kana irratti hojjettootni tika biyyoolessaa maaliif iccitii dhimphisu,oduu funaanuu irratti maaliif dadhaban, wal amantamummaan tika gidduu maaliif dhibe kan jedhamu ilaalanee jira. Hojjettootni tika biyyoolessaa doorsifamaa jiraachuu fi miindaan isaanii baay’ee gad bu’aa tahuu irraa iccitii gurguru jedhamee kan gamaggamame yoo tahu, baatii Guraandhalaa irraa kaasee miindaa fi durgoon hojjetoota tikaa dachaa akka tahu murteeffamee jira. Mootummaan Itoophiyaa,PPn armaan dura INSA keessatti hojjettoota tika Israa’el, hordoffiidhaaf ammoo lammiilee Eertiraa kumaatamaan fayyadamaa akka ture gamaggamamuun bu’aan isaa kisaaraa lubbuu fi qabeenyaa duwwaa akka tahe irratti waliif galameera.
2. Kanaan dura akkuman isinitti hime Amaaraan bifa addaan GT ijaaraa jirti. ABIN, EZEMA, BALDERAS wal tahuudhaan hojii kanatti jiru. Dammaqaan baajataan gargaara. Leenjistootni lammiilee Eertiraati. Bakki leenjii Birshalaqoo dabalatee kaampiiwwan magaalaa Bahir Dar keessattis kennamaa jira. Matakkal keessaa dargaggoota funaananii dhimma kanaaf qofaatti leenjisaas jiru.
Osoo Ijan Agarruu Hoggantootaa Keenyaa Dhabuuf Yaanaa…!!!!